ဆုလှိုင်ဝင်း ရဲ့ အမိုက်စား ကပြထားတဲ့ TT ဗီဒီယိုလေး… – Shwe Naung
ဆုလှိုင်ဝင်း ရဲ့ အမိုက်စား ကပြထားတဲ့ TT ဗီဒီယိုလေး…
N N | March 26, 2021 | Celebrity | No Comments
မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက် အနေနဲ့ ရော Dancer တစ်ယောက် အနေ နဲ့ ပါ ရပ်တည် နေပြီး ပုရိသ တွေရဲ့ သည်းသည်း လှုပ် ၀န်းရံ နေကြတဲ့ ဆုလှိုင်၀င်းကို သိကြမယ် ထင်ပါ တယ်နော် ။
သူမရဲ့ အမိုက် စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်းလေး ဟာဆိုရင် လည်း မိန်းကလေးတိုင်း သဘောကျ အားကျ ရတဲ့ ဘော်ဒီလေး ဖြစ်တဲ့ အပြင် ဖြူဖွေး ၀င်းဥနေတဲ့ အသားအရည် လေး နဲ့ ချောမော‌ လှပတဲ့ ရုပ်ရည်လေး ကို လည်း ပိုင်ဆိုင် ထားသူလေး ဖြစ်ပါ တယ် ။
ဆုလှိုင်၀င်း ဟာ အက ဗီဒီယိုလေး တွေနဲ့ သူမရဲ့ ခပ်မိုက်မိုက် ဘော်ဒီ အချိုးအစား လေးကြောင့် ပရိသတ်တွေ စတင် သတိထား မိလာတာ ဖြစ်ပြီး အခု ဆိုရင် ကြေ ာ်ငြာတွေနဲ့ အတူ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု လေး တွေ စတင်လုပ်ကိုင် လာနေပြီပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။
ဆုလှိုင်၀င်း ဟာ မကြာ ခဏ ဆိုသလို လည်း သူမ ရဲ့ အက ဗီဒီယို လေးတွေ၊ Tik Tok ဗီဒီယို လေး တွေ ကို တင်ပေး လေ့ ရှိပါ တယ် … .
ဆုလှိုင်၀င်း ဟာ အခု ဆိုရင် လည်း Tik Tok မှာရေပန်းစား နေတဲ့ သီချင်းလေးတွေ အတိုင်း ခပ်မိုက်မိုက်လေး ကကာ သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ မှာ တင်ပေး လာခဲ့ပါ တယ် ။
ဆုလှိုင်၀င်းဟာ စကပ် တိုလေး ၀တ်ဆင်ပြီး ခါးလေးကို ယမ်းခါ ကာ ကနေတာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ပရိသတ် တွေ အတွက် ပြန်လည် မျှ ဝေ ပေး လိုက် ပါ တယ်နော် … .
အိန်ဂျယ်ကို ရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်များ…
ချိုဇင်ဝင်းပြည့် ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး….
အမိုက်စား ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်နှင့် ဆက်ဆီကျကျ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ ပိုပိုရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး………